म्याद थप्ने कुरा जोक भइसक्यो | Bishow Nath Kharel
Friday, 21 December 2012 09:25 नागरिक
हामी नेपाली इतिहासको कालखण्डमा अक्सर आवेशमा आएर धेरै कुरा सोच्दै नसोची बोलेर, आफ्ना लागि, आफ्नो परिवारका लागि, निर्णय लिँदा रहेछौँ। त्यो इतिहासले सत्य ठहर्याएको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै उनका छोरा नातिले पनि त्यसरी नै सोचेको भए यो देश शायद अर्कै अवस्थामा पुग्थ्यो। त्यस्तै अर्को उदाहरण, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई त राजाले थुनेकै हो नि त। त्यसपछि निर्वासनमा पनि जानुभएकै हो, दरवारकै कारण। त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँले नेपालको धेरै पछिको विचार गरेर भौगोलिक राजनीतिलाई शुद्ध लेखाजोखा गरेर, ‘राजाको गर्धन र मेरो गर्धन त एउटै अचानोमा रहेछ,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होला। उहाँले त्यसै त त्यो कुरा भन्नुभएको थिएन होला? उहाँ धेरैपछिको कुरा सोच्न सक्ने धेरै कम नेपालीमध्येको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि बीपीमात्र त्यस्ता एक राजनेता हुन्, जसको फोटो मेरो घरको भित्तामा टाँसिएको छ।
किनभने जुन हुनुपर्ने कुरा थिए, त्यो भइराखेका थिएनन्। मैले यही विषयमा सार्वजनिकरुपमा पनि भनेको छु, ‘यदि त्यसबेला म सुरक्षा संस्थाको प्रधान सेनापति भइदिएको भए न यो देशबाट राजसंस्था जान्थ्यो, न देशको यो हालत हुन्थ्यो।’ तर म निर्णायक अवस्थामा थिइन। मैले त मेरो हाकिमलाई जाने/बुझेका, सुनेका र इर्द-गिर्दका कुरा सुनाउने र आफूलाई लागेको कुरा सुझाउनेमात्र हो।
यी आधारभूत विषयमा निर्णय भइसकेका थिए। त्यसैले ‘म भइदिएको भए!’ भनेर भनेको कारण त्यही हो।
यो त राजनीतिक कुरा भयो। सबै नेताले यसै त भन्छन्।
हिजोआज तपाईँको भान्छामा खाना पकाउँदा पनि राजनीति हुन्छ। अहिलेको जमानामा राजनीति बुझ्नुभएन भनेदेखि कहाँ चल्न सकिन्छ? तपाईँलाई याद छ भने म युनिफर्ममै हुँदा पनि सार्वजनिकरुपमै भनेको छु- म राजनीति गर्दिन तर राजनीति जान्ने प्रयत्न गर्छु।
तपाईँ वास्तवमै एग्रेसिभ मान्छे हो। धेरैले तपाईँको त्यो नेचर मन पनि पराउँथे। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। माओवादी सरकारमा पुग्यो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँलाई तपाईँकै फुली किन फुकाल्नुपरेको त?
हो, राम्रो थियो। उहाँहरूको पार्टीसँग पनि राम्रै थियो। उहाँहरू शक्तिमा आउनुभन्दा पहिलादेखि। चुनावअघि र चुनाव भइसकेपछि पनि म आफ्नो कार्यक्षेत्रको सीमा नाघेरै गिरिजाबाबुलगायत् अरु नेता र माओवादीलाई पनि भेटेर केही कुरा कन्भिन्स गर्न गएकै हो। मैले के भनेको थिएँ भने, ‘राजालाई नहटाउनूस्। बरु खोपामा कतै लगेर राखिदिनूस्। अर्को, नेपाली सेनालाई नचलाउनूस्। यो संविधान र कानुनअन्तर्गत चल्ने संस्था हो। बरु संविधानमा केही त्रुटि भए त्यो संशोधन गरेर लैजानूस्। तेस्रो, हतियार सरकारलाई बुझाइदिनूस्। तपाईँहरू आफैँ सरकारमा हुनुहुन्छ। लडाकु केटाहरू कहाँ कहाँ जाने हुन्? कति सेनामा आउँछन्, कति प्रहरीमा जान्छन्? कतिलाई पढ्न मन लागेको होला। स्नातकसम्म पढाइदिउँ। घरबासको व्यवस्था गरिदिउँ’ भनेकै हो। उहाँहरू हुन्छ, हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर तेस्रो, चौथो कुराकानीपछि मलाई शंका लाग्न थाल्यो। जब संविधान र कानुनको कुरा आउँछ, नेपाली सेना त तयारी अवस्थामा बस्नैपर्छ। हामीले त अरू हेर्ने नै होइन, कानुनमा के छ? संविधानमा के छ? त्यसैलाई मान्ने हो। नेपाली सेनाले संविधानको आधारभूत कुरामा अडान लिएको मात्र हो। सेनाले संसारमा प्रजातन्त्रका विरुद्ध धेरै काम गरेका छन्। तर नेपाली सेनाले चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा अडान लिनुको कारण के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ।
हो, म बोलाएको ठाउँ जहाँ पनि पुग्छु। मैले केही समय पहिला हाम्रो देशमा केही वर्ष ‘केओटिक सिचुयसन’ रहन्छ भनेको छु। यो दुईवटा विचारको लडाईँ हो। यो कुरा हामीले बिर्सन चाहिरहेको छौँ। यो अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु भने (राष्ट्रको) प्रमुख भएर बसेको व्यक्तिले यस्तो अवस्थामा, कानुनभित्र कुनै कुरा छ/छैन, संविधानभित्र छ/छैन भनेर हेरेर बस्नुहुँदैन। त्यो व्यक्तिले निर्णय लिन सक्नुपर्छ। त्यो रिस्क लिन सक्नुपर्छ। त्यो रिस्क जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, देशको पक्षमा हुनुपर्छ।
त्यो राष्ट्रपतिलाई भन्नूस् या शितल निवासलाई भन्नूस्, जसलाई भन्नूस्। प्रमुख भएर बसेको मान्छेलाई नै भनिन्छ नि यस्तो कुरा। अहिले फेरि पाँच दिन म्याद थपियो। अनि त्यसपछि फेरि के? यस्तो अवस्थामा हुन्थेँ भने म निर्णय लिन्थेँ। त्यो निर्णय के हुनुपर्छ भनेदेखि मेरो विचारमा, ‘एउटा मिति तोकेर सरकार बनाउनुपर्यो । सरकारमा सबै तप्काका विद्वान्को प्रतिनिधित्व गराउनुपर्यो। पार्टीहरूलाई नै बोलाएर भन्ने हो। मैले यस्तो यस्तो गर्दैछु र यसको डेडलाइन यो हो भनेर। सरकार गठन गरेर चुनाव गराउने पहिलो कुरा। त्यससँगै संवैधानिक बाधा व्यवधान पनि हटाउँदै जानुपर्यो।’ यो खुबी अहिले देखाउन सकिएन भने हाम्रो आउने पुस्तालाई हामीले के जवाफ दिने? कतिसम्म म्याद थप्दै जाने? यो त जोक भइसक्यो।
किन नहुने? उहाँले भन्न सक्नुपर्यो- ‘म यस्तो जोकर बनेर बसिरहन सक्दिन। यस्तो गर्छु।’ हेर्नूस्, प्रमुख व्यक्तिले निर्णय लिने भनेकै अफ्ठ्यारो बेलामा हो। अरुबेलामा त जसले लिए पनि भइहाल्यो नि। परीक्षाको घडी आएपछि परीक्षा दिने हो। कि पास भइन्छ कि फेल। केको चिन्ता?
(सहयोगी स्वरूप आचार्य)
Source : http://www.nagariknews.com/interview/97-political-interviews/50749-2012-12-21-04-06-27.html